Iibinta Mac-yada iyo Ipad-ku waxay koraan rubuca labaad ee sanadkan | Waxaan ka socdaa mac
Iibinta Mac-yada iyo Ipad-ku waxay koraan rubuca labaad ee sanadkan
Toni Cortes | 28/07/2021 22:00 | Noticias
Apple nasiib ayuu ku jiraa. Waxaad jabineysaa diiwaanka iibka labada kumbiyuutar iyo iPads. Qeyb si aad ah u joojisay, sida Macs, ayaa dib loogu dhajiyay qaab cajiib ah. Iyo tan Ipad-ka ayaa sii kordheysa. Sababtoo ah shaki la'aan waa kiniinka ugu fiican suuqa.
Taas oo dhanna waxay ku mahadsan tahay laba arrimood oo aasaasi ah. Midda hore waa cudurka faafa ee farxadda leh, kaas oo ku qasbaya dad badan oo adduunka ku nool inay ka shaqeeyaan oo wax ka bartaan guriga, taasina waxay marwalba muujineysaa baahi degdeg ah oo loo qabo kombuyuutarro cusub iyo kiniinno. Tan labaadna, shaki la'aan, guusha Macs-ka cusub Silicon Apple. Gaajada waxaa lagu daray rabitaanka cunitaanka.
Marka loo eego tirooyinka dakhliga ee Apple ay hadda sii deysay rubuca saddexaad ee maaliyadeed ee 2021 (xusuusnow inay tahay rubuca labaad ee dhabta ah ee kalandarka), Apple wuu iibiyay $ 8.800 bilyan oo Macs ah. Waxay sidaas ku dhaaftay 6.500 milyan oo ay ugu talo gashay isla fikraddaas isla rubucii sanadkii la soo dhaafay.
Si kastaba ha noqotee, rubuckan labaad ee sanadkan ayaa ka hooseeyay iibka isla fikraddaas marka loo eego rubucii hore, halkaas oo Apple ay ku soo dallacday Lacagta 9,1 doolar kaliya kumbuyuutarrada. Cadho, shaki la'aan.
Haddii aan ka hadalno iPads, Apple ayaa la iibiyay 7.400 malaayiin oo doollar ah, markii loo barbardhigo 6.6 bilyan isla rubucii labaad ee sannadkii hore. Xaaladdan oo kale, tirada iibka ee rubuca hore ee 2021 sidoo kale lama dhaafin.
Tim Cook wuxuu xaqiijinayaa in rubuca koowaad ee sanadka uu ahaa iPad iibinta ugu fiican taariikhda oo dhan, ku dhowaad toban sano, iyo sidoo kale iibinta kumbuyuutarka shirkadda, oo dhigaya rikoor cusub. Apple CFO Luca Maestri ayaa sidoo kale sheegay in afarta rubuc ee ugu dambeysay ay ahaayeen kuwa ugu wanaagsan xagga tirooyinka iibka taariikhda kombiyuutarada Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Iibinta Mac-yada iyo Ipad-ku waxay koraan rubuca labaad ee sanadkan
Waxay ku eedeynayaan Apple in aysan si dhab ah u qaadin weerarada Pegasus-ka ay soo saartay
Hadda oo aan ku jirno xagaaga, muxuu Apple ka yiri iska caabbinta biyaha ee Apple Watch?